> Resource> iPod> Olee naghachi Photos si iPod Nano
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si iPod Nano?
M nwere ihe iPod Nano 3th n'ọgbọ. E nwere ọtụtụ foto nke ụmụ m na ya. N'ihi na ụfọdụ ihe a ụtụtụ na m ehichapụ foto niile na m iPod Nano. Gịnị bụ ọbụna njọ, m na-adịghị ndabere nke ha na kọmputa m kwa. Na m chọrọ ịmara Enwere m ike ka naghachi ehichapụ foto site na m iPod Nano. Ọ bụrụ na ọ bụ omume, biko gwa m otú. Ekele.
Zuo ike! N'ezie, na-ehichapụ photos ka na-adị na gị iPod Nano. Ha ka na-akara dị ka keerughi data site usoro. Ha ga-efu na-adịgide adịgide naanị onye ọnọdụ: ọhụrụ data na gị iPod Nano na-edochi ha. Ya mere, i kwesịrị ịkwụsị iji gị iPod Nano n'otu ntabi ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi foto site na iPod Nano. Mgbe ahụ ị pụrụ anya n'ihi na a bara uru iPod Nano foto mgbake omume na Internet.
E nwere otutu mgbake omume na Internet. Wondershare Photo Recovery for Mac Bụ otu nke kasị mma omume nke-ewepụta foto site na iPod Nano. Nke a dị ike na mfe na-eji ngwá ọrụ na-enyere gị iji naghachi ehichapụ, formatted, ma ọ bụ merụọ foto gị iPod Nano na 3 nzọụkwụ. Ọ bụ ike naghachi videos na songs si gị iPod Nano kwa. Ugbu a, usoro ihe omume bụ dakọtara niile iPod Nano ọgbọ.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery na-amalite iPod Nano foto mgbake ugbu a.
Naghachi Photos si iPod Nano na 3 Nzọụkwụ
Aga m na-egosi gị otú ị naghachi ehichapụ foto site na iPod Nano na Mac version nke usoro ihe omume. Ọ bụrụ na ị a Windows kọmputa njirimara, i nwere ike hazie mgbake na yiri nzọụkwụ na Windows version kwa.
Cheta na: Iji malite iPod Nano foto mgbake, mkpa ka ị họrọ "Kwado disk eji" ma ọ bụ "Iji aka jikwaa music na vidiyo" na iTunes ka gị iPod Nano dị ka a mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode nke-ewepụta foto site na iPod Nano
Mgbe wụnye na launching ngwa na gị Mac, e na abụọ mgbake ụdịdị maka gị nhọrọ: "Echefuola File Iweghachite" na "Raw Iweghachite".
Naghachi furu efu foto site na iPod Nano, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode mbụ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị iPod Nano
A nzọụkwụ, ngwa ga-egosi draịva / mpịakọta na gị Mac, ị nwere ike họrọ otu maka gị iPod Nano na pịa "iṅomi" na-chọta furu efu photos.
Ọ bụrụ na photos na-efu n'ihi formatting, mkpa ka ị họrọ "Kwado iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi foto site na iPod Nano
Mgbe scanning, hụrụ data na gị iPod Nano ga-edepụtara ke faịlụ ụzọ. Ịnwere ike ihuchalu foto niile ka ego ma gị furu efu photos nwere ike natara ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ photos ị na-aga naputa site na gị iPod Nano na pịa "Naghachi" na-ha na gị Mac.
Image Iweghachite Mac: Olee naghachi Image si Mac
Olee otú Hichapụ Podcast si iPod
Olee otú Tinye Videos ka iPod nano effortlessly